के तपाईलाई जानकारी छ अण्डाका यी दुनिया फण्डा ?
Wednesday,7Mar, 2018 4:03 PM
अन्डा स्वास्थ्यका लागि त राम्रो हुन्छ नै, साथै केही स्थानमा त यसलाई सजावटका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तपाईलाई थाहा छ त अन्डाका यी रोचक फन्डा ?
त्यसो त अन्डा निकै नै चाँडै बिग्रन्छ । तर यदि तपाईलाई शंका छ भने पानीको ग्लासमा अन्डा हाल्नुस् । यदि त्यो तल गयो भने अन्डा ताजा छ यदि पानीको माथि नै तैरियो भने बुझ्नुस् त्यो अण्डा बासी छ ।
खाने कि नखाने ?
यदि अण्डामा थोरै हिस्सा रातो भाग निस्कियो भने अक्सर मानिसहरु त्यो खाना संकोच मान्दछन् । तर यो खानु हानिकारक हुँदैन । यो अण्डाको जर्दीसँग सम्बन्धित रक्त कोशिकाहरु हो ।
उमाल्ने कि नउमाल्ने ?
यदि तपाई अण्डा फुटाउनुअघि सुनिश्चित गर्न चाहनु हुन्छ कि त्यो ठिकसँग पाक्यो कि पाकेन, त्यसो हो भने अण्डालाई टेबुलमा राख्नुस् । यदि अण्डा ठिकसँग घुमिरहेको छ भने त्यो भित्रैसँग पाकेको छ भनेर बुझ्नुस् र यदि यताउता लड्खडाइरहेको छ भने अहिले पनि अन्डा काँचै छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
पँहेलो कि सेतो ?
अण्डाको सेतो भागमा ५७ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । अधिकांश मानिस मान्दछन् कि पँहेलो हिस्सामा कोलेस्ट्रोलका अलावा अरु केही पनि हुँदैन । तर यस्तो होइन । अण्डाको जर्दीमा भिटामिन ए, बी, डी र इ हुने गर्दछ ।
कति पँहेलो जर्दी ?
दर्जीमा पँहेलोपनबाट त्यसको पोषकको कुनै लिनु दिनु हुँदैन । जर्दीको रंग कुखुरााके आहारमा निर्भर हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक स्थानका अण्डा हेर्दा केही अलग देखिन्छन्।
यदि राति पार्टीमा आवश्यकताभन्दा बढी पिउनु भएको छ भने बिहान खाजामा अण्डा खाँदा ह्याङओभर कम गर्न सहयोग पुग्छ । अण्डाले शरीरमा रहेको विषालु तत्वलाई सोस्ने काम गर्दछ र ह्याङओभरबाट बचाउँछ ।
मात्र कुखुराको होइन
यद्यपि मानिसहरु आमरुपमा कुखुराको अण्डा मात्र खाइन्छ भन्ने बुझ्छन् । तर वास्तवमा हाँसलगायत अन्य पंक्षीको अण्डा पनि खान सकिन्छ ।यहाँसम्म कि शुतुरमुर्गको अण्डा पनि खान सकिन्छ ।
एउटा कुखुराले एक वर्षमा करिब २५० देखि २८० वटासम्म अण्डा दिन सक्दछ । कुखुराले वर्षभरि अण्डा पार्ने गर्दछ । अण्डा पार्ने कुनै विशेष सिजन हुँदैन । संसारभरमा अण्डाको उत्पादन ४० प्रतिशत चीनमा हुने गर्दछ ।एजेन्सी